I-Slime Rancher 2: Konke Odinga Ukukwazi Ngalo mdlalo - Ukudlala
I-Slime Rancher 2: Konke Odinga Ukukwazi Ngalo mdlalo
I-Slime Rancher 2: Izokhishwa Nini?
I-Slime Rancher 2: Amapulatifomu
I-Slime Rancher 2 (I-Trailer)
I-Gameplay ka-Slime Rancher 2 Ichazwe Lapha
I-Slime Rancher 2: Abadlali abaningi
I-Slime Rancher 2: i-DLC
I-Slime Rancher 2, inkondlo elama ehlonishwa kakhulu yesifanisi sokuqala esiwine imiklomelo nesihlonishwa ngokugxekayo, sizoqhubeka nokuzidela kuka-Beatrix LeBeau emthaleni. Ngenkathi i-sequel imenyezelwe njengento emangazayo kwa-E3 ngo-2021, kunolwazi oluncane kakhulu olutholakalayo mayelana nokuthi izobukeka kanjani.
Silindele ukuvakashela isiqhingi, siqoqe futhi sikhulise ama-slime amancane ezinhlobo ezihlukahlukene, sithengise iziza zazo, futhi ngokuvamile sibe nesikhathi esimnandi. Kodwa-ke, kusazobonakala ukuthi le ndlela elandelayo izokwakhela kanjani empumelelweni yesithombe sokuqala.
Zingaki izinhlobo ezahlukene ze-slime esingalindela ukuzibona esikhathini esizayo? Ubuchwepheshe obusanda kwenziwa butholakale. Ingabe kukhona okusha ongakubika? Konke esikwaziyo njengamanje nge-Slime Rancher 2 kungatholakala ezigabeni ezingezansi.
Ngokwezinhlelo zamanje, i-Slime Rancher 2 izokhishwa ngo-2022 ngokushesha okukhulu. Ngaphezu kwalokho, uma kubhekwa lona kuphela umdlalo wesibili we-Slime Rancher osuka e-Monomi Park, asinaso isibonelo esingokomlando sokuthi igeyimu ingase yethulwe nini.
I-Slime Rancher 2 izokwethulwa ku-Xbox One X kanye nasezinkundleni ze-Windows PC, njengoba kwakunjalo eyandulelayo. Ngaphandle kwalokho, abadlali be-console bazokujabulela ukwazi ukuthi umdlalo uzotholakala ku-Xbox Game Pass ngosuku lokwethulwa kwawo!
I-Slime Rancher 2 ibuyela eFar, Far Range, lapho ehlangana khona no-Beatrix LeBeau e-Rainbow Island engaqondakali, elisogwini olungavamile ngaphesheya koLwandle lwe-Slime. UBeatrix LeBeau uyilungu lomndeni wakwaSlime Rancher 2.
Ukwengeza, sizoba nesiqhingi esisha sha esizosihlola, i-Monomi Park esichaza njengesipendwe ngemibala ehlukahlukene yothingo oluhlala ishintshashintsha, futhi ububanzi baso obubanzi buzofaka umoya wokuzidela [ka-Beatrice] esivivinyweni. Sesikhathele ukulinda ukuze izinto zihambe! U-Beatrix uzobuyela epulazini lakhe ngemva kokuwela imephu nokuqoqa ama-slime, lapho ezowanakekela njengemfuyo impilo yakhe yonke. Kulindeleke ukuthi umdlalo ufane nesihloko sangempela, kodwa wonke umoya wegeyimu uzoba musha ngokuphelele.
Engxoxweni yakamuva ne-K2C Digital, umqondisi wegeyimu ye-Slime Rancher kanye ne-CEO yonjiniyela i-Monomi Park, u-Nick Popovich, uthe i-sequel izoba nkulu kakhulu kuneyokuqala ngoba ithimba labathuthukisi seliqala kabusha ngegeyimu.
Ngokusho kukaPopovich, esinye sezizathu ezenza ukuthi iqembu liqhubeke nomdlalo wokuqala yingoba empeleni, futhi ngisho ngokoqobo, lifinyelele umkhawulo weplanethi ngesikhathi somdlalo owedlule.
Sasingokoqobo, futhi ngisho ngokoqobo, sifinyelela emaphethelweni angaphandle wendawo yonke, kusho umlandisi. Njengoba unjiniyela echaza, Yonke into eku-Slime Rancher yasekuqaleni yenzeka endaweni efanayo ukuze kuhlinzekwe ukunyakaza okungenazihibe phakathi kwezindawo, futhi besisondela emingceleni ebonakalayo yale ndawo ebonakalayo.
Ngokulandelana, wonke umuntu unethuba lokuhumusha lobu buciko obusha esibuthuthukisile ngesikhathi esifanayo, futhi ingxoxo yenzeka ngesikhathi esifanayo. Umehluko phakathi kwabadlali asebekhulile nabasanda kuzalwa awucishe ube mkhulu njengoba ubonakala, waqhubeka echaza.
Amanye ama-slime nezinto zokudla eziboniswe kuma-trailer noma eziphawulwe ezithombeni, njengalezo ezitholwe e-Plort Market, ziqinisekisiwe ukuthi ziyabuya futhi/noma zengezwa kugeyimu:
I-Ray Donovan Isizini 8: Imininingwane Odinga Ukuyazi Njengamanje!
Abangane Abasuka Ekolishi Isizini 3: Izibuyekezo Odinga Ukuzazi Namuhla!
I-Pitch Perfect 4: Izinto Odinga Ukuzazi!
Emdlalweni wangempela we-Slime Rancher, bezingekho izinketho zabadlali abaningi ezitholakalayo, futhi asilindele ukuthi kuzoba khona ku-Slime Rancher 2. Ngaphambilini, ithimba labathuthukisi beliqiniseka ukuthi u-Slime Rancher uzoba nesipiliyoni somdlali oyedwa kuphela, futhi babeqinisile ekuhloleni kwabo.
Nakuba sithokozela inketho yokuthumela i-imeyili kubangani nokuvakashela amanye amapulazi njengezibukeli, singalijabulela ikhono lokwenza kanjalo esikhathini esizayo. Isizathu sokuba nethemba, ngokombono wethu!
Ochungechungeni lwezitolimende, amaphakethe e-DLC omdlalo wangempela we-Slime Rancher enziwe atholakala, iningi lawo lihlanganisa izimonyo ezengeziwe kanye nemishini yama-slime akho.
Izithasiselo eziningi ezishintsha umdlalo, okuhlanganisa nezindiza ezidonsa umoya ezingahle zihlelwe ukuze zisize ngemisebenzi eyahlukene endaweni yepulazi, izimfashini zephathi ye-pool, nokwandiswa kwesitoreji esikhulu, zenziwe zatholakala njengengxenye yochungechunge lokuthuthukiswa kwamahhala kwemidlalo futhi.
Njengomphumela, sibikezela ukuthi i-Slime Rancher 2 izothola impatho efanayo, nekhwalithi yegeyimu ithuthuka njalo ngezibuyekezo phakathi nesikhathi sayo.
I-New Tech izama ukubhuloka i-Digital Divide
I-STALKER 2: Konke odinga ukukwazi!